कुनै आईएसओ र प्रणाली को लागी एक बूटयोग्य यूएसबी कसरी बनाउने ग्याजेट समाचार
यदि म इमान्दार हुनु पर्छ भने, मलाई लाग्छ २०० 2003 देखि म अब कुनै सीडी / डीभीडी प्रयोग गर्दिन। त्यतिन्जेल, हरेक चोटि म हेभी प्रोग्राम वा सम्पूर्ण अपरेटिंग सिस्टम स्थापना गर्न चाहन्थें, मैले यसलाई DVDमा जलाएर गरेँ, तर यसले मलाई सम्पूर्ण रूपमा पूरा हुन अनुमति दिने तरिकाहरू पत्ता लगाउन धेरै समय लिएन। कम्प्युटरबाट सफ्टवेयर हटाउने वा USB स्टिकमा रेकर्ड नगरी प्रक्रिया गर्नुहोस्। यदि, म जस्तो, तपाईं एक अपरेटि system प्रणाली स्थापना गर्न डिभिडिको प्रयोग गर्न चाहानु हुन्न, उत्तम छ एक बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्नुहोस्.
यस गाईडमा हामी कसरी बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्ने भनेर वर्णन गर्नेछौं ताकि हामी सक्दछौं पेन्ड्राइभबाट विन्डोज, म्याक र लिनक्स स्थापना गर्नुहोस्। यस पोष्टमा वर्णन गरिएका विधिहरू ती हुन् जुन म सामान्यतया प्रयोग गर्छु र म तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छु किनकी तिनीहरू मलाई सरल लाग्छ। मलाई थाहा छ कि ती अन्य सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर सिर्जना गर्न सकिन्छ (जस्तै अल्ट्रा आईएसओ), तर के मैले व्याख्या गर्न लागेको छु मलाई जुनसुकै अनुभवहीन भए पनि उनीहरू कुनै पनि प्रयोगकर्ताको पहुँचमा नभएको जस्तो लाग्छ।
1 विन्डोज बुटेबल युएसबी कसरी बनाउने
2 म्याक ओएस एक्स बुटेबल USB कसरी सिर्जना गर्ने
3 लिनक्स बुटेबल USB कसरी सिर्जना गर्ने
3.1 युनेटबुटिनसँग (प्रत्यक्ष सीडी)
3.2 लिली USB क्रिएटरको साथ (लगातार मोड)
विन्डोज बुटेबल युएसबी कसरी बनाउने
यद्यपि यो बिभिन्न तरीकाले गर्न सकिन्छ, मलाई लाग्छ सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको उपकरण प्रयोग गर्नु हो WinToFlash। भ्रमबाट जोगिनको लागि, म विन्डोज बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्नका लागि निम्न चरणहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गर्छु:
आउनुहोस् WinToFlash पृष्ठ र हामी यसलाई डाउनलोड गर्दछौं।
हामी WinToFlash खोल्छौं। पहिलो पटक हामीले यसलाई प्रयोग गर्दा हामीले यसलाई कन्फिगर गर्नुपर्नेछ, जसको लागि हामी «Next click क्लिक गर्दछौं।
हामी WinToFlash निम्न स्क्रिनशटहरू संकेतको रूपमा कन्फिगर गर्दछौं।
हामी दुई बक्सहरू चिन्ह लगाउँछौं र «Next on मा क्लिक गर्दछौं।
हामी विकल्प select नि: शुल्क लाइसेन्स select चयन र «अर्को» क्लिक गर्नुहोस्।
महत्वपूर्ण: निश्चित गर्नुहोस् कि हामीसँग छ "Mystartsearch" को बक्स अनचेक गरियो «अर्को» क्लिक गर्नु अघि। बक्सलाई अनचेक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि अन्यथा हाम्रो वेब ब्राउजरमा खोजी ईन्जिन परिवर्तन हुनेछ। हामीले स्वीकारेको कुरालाई नपढीकन "स्वीकार्नु, स्वीकार्नु, स्वीकार" गर्नु राम्रो विचार होइन, विशेष गरी यदि हामीले पढ्नु पर्ने भनेको एक वाक्य मात्र हो भने।
WinToFlash पहिल्यै कन्फिगर गरिएको साथ, हामी बुटेबल USB सिर्जना गर्न गइरहेका छौं। हामी हरियो "V" मा क्लिक गरेर सुरु गर्दछौं।
अर्को स्क्रिनमा, हामी «अर्को» क्लिक गर्दछौं।
अर्को एकमा, हामी दोस्रो विकल्प मार्क गर्छौं र «Next on मा क्लिक गर्दछौं।
अर्को चरण भनेको विन्डोज आईएसओ छवि छनौट गर्नु हो, हाम्रो पेन्ड्राइभलाई गन्तव्य ड्राइभको रूपमा छनौट गर्नुहोस् र «अर्को» मा क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को विन्डोमा, हामी बाकस जाँच गरेर स्वीकार गर्दछौं जुन "म इजाजतपत्र सम्झौताको सर्तहरू स्वीकार गर्दछु"र हामी« जारी राख्नुहोस् on मा क्लिक गर्दछौं।
अन्तमा, हामी प्रक्रिया समाप्त हुनको लागि कुर्दछौं। यसले १ 15-२० मिनेट लिन सक्दछ, कम्प्यूटरमा निर्भर रहँदै। यदि हाम्रो टीम संसाधन-सीमित छ, पर्खी लामो हुनेछ।
म्याक ओएस एक्स बुटेबल USB कसरी सिर्जना गर्ने
मैले भिन्न तरीकाले र बिभिन्न अवसरहरूमा भनें, म एक "सफ्टवेयर hypochondriac" को एक बिट हुँ र मलाई (हे, मलाई) यो राम्रो विचार जस्तो देखिदैन। पेन्ड्राइभबाट ओएस एक्स स्थापना गर्नुहोस्। कारण यो छ कि यो मलाई भयो जुन मैले एउटा बुटेबल यूएसबीबाट ओएस एक्स स्थापना गरेको छु र यसले रिकभरी पार्टिसन सिर्जना गरेको छैन, त्यो विशेष विभाजन जसले हामीलाई म्याकबाट नयाँ चरणहरू पुनर्स्थापना गर्न र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनेछ। एउटा उपकरण थप रूपमा, ओएस एक्स बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया सामान्यतया लामो हुन्छ, त्यसैले म मेरो समय लिन्छु र यसलाई अर्कै तरिकामा गर्छु (जसलाई मलाई थाहा छैन कि कसैले पनि म पागल छु भनेर भन्दिन)। यदि, कुनै पनि कारणको लागि, मलाई के भयो त्यो तपाईंलाई भयो, मलाई लाग्छ कि जब तपाईं माभेरिक्स स्थापना गर्नुहुन्छ (२०१ in मा, यदि मैले गलत गरेको छैन भने) र यसले तपाईंको लागि रिकभरी विभाजन सिर्जना गर्दैन भने, तपाईंले के गर्नुपर्दछ। गुगलको फाईलको खोजी गर्दैछ जुन स्थापना भएको बेलामा त्यस्तो विभाजन सिर्जना गर्दछ।
ओएस एक्स बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्न हामीले म्याकबाट यी चरणहरू अनुसरण गरेर गर्नुपर्नेछ:
गर्नका लागि सर्वप्रथम म्याक अनुप्रयोग स्टोर खोल्नुहोस् र भर्खरको एप्पल अपरेटिंग प्रणालीको लागि स्थापना फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् (यो पोष्ट लेख्दा यो OS X १०.११ एल क्यापिटन हो)।
हामीले DiskMakerX को नयाँ संस्करण पनि डाउनलोड गर्नुपर्नेछ तिनीहरूको वेबसाइट.
हामी हाम्रो पेन्ड्राइभ म्याकमा जडान गर्दछौं। यो कम्तिमा GB जीबी हुनुपर्दछ र "ओएस एक्स प्लस रेजिस्ट्रीको साथ" ढाँचा गरिएको हुनुपर्दछ।
हामी DiskMakerX खोल्छौं।
हामी एल् क्यापिटन (१०.११) मा क्लिक गर्दछौं।
हामीसँग क्लिक गर्नुहोस् "यो प्रतिलिपि प्रयोग गर्नुहोस्", जबसम्म हामीसँग हाम्रो अनुप्रयोग फोल्डरमा ओएस एक्स स्थापना फाइल छ।
हामी «एक GB जीबी यूएसबी थम्ब ड्राइव on मा क्लिक गर्दछौं।
हामी हाम्रो पेनड्राइभ छान्छौं र «यो डिस्क छनौट गर्नुहोस् on मा क्लिक गर्दछौं।
हामी "Erase त्यसपछि डिस्क सिर्जना गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्दछौं।
हामी «जारी राख्नुहोस् on मा क्लिक गर्दछौं।
जब यसले हामीलाई पासवर्डको लागि सोध्दछ, हामी यसलाई प्रविष्ट गर्दछौं।
जब प्रक्रिया समाप्त हुन्छ, हामी «Quit on मा क्लिक गर्दछौं।
यद्यपि यस पोष्टमा हामी कसरी बुटेबल यूएसबीहरू सिर्जना गर्ने बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, यो उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ कि म्याकमा हाम्रो हार्ड ड्राइभ भन्दा फरक ड्राइभबाट सुरू गर्न, हामीले गर्नु पर्छ। Alt कुञ्जी थिच्दा कम्प्युटर खोल्नुहोस् यो जारी नगरे सम्म हामी उपलब्ध छौं कि सबै डिस्कहरु देखा पर्दछ। हामीले केहि गर्नुपर्नेछ यदि हामी चाहानुहुन्छ रिकभरी पार्टीशनमा प्रवेश गर्नु हो जुन मैले यस विधिको सुरूमा कुरा गरिरहेको थिएँ।
लिनक्स बुटेबल USB कसरी सिर्जना गर्ने
Para एक लिनक्स बुटेबल यूएसबी सिर्जना गर्नुहोस् म दुई फरक विकल्प सिफारिश गर्दछु। पहिलोको साथ एक लाइभ USB सिर्जना गर्नु हो युनेटबुटिनविन्डोज, म्याक र लिनक्स को लागी उपलब्ध छ। दोस्रो भनेको लिली युएसबी क्रिएटर जस्ता अनुप्रयोग प्रयोग गर्नु हो जुन हामीलाई स्थिर स्थापना गर्न अनुमति दिनेछ। एक स्थिर यूएसबी लाई भिन्नता के छ? ठीक छ, प्रत्यक्ष यूएसबीले हामीले गरेका परिवर्तनहरू बचत गर्दैन हामी एक पटक कम्प्युटर बन्द गर्‍यौं, जबकि स्थिरले व्यक्तिगत फोल्डर सिर्जना गर्दछ (फोल्डर / घर) 4GB सम्म, अधिकतम FAT32 फाइल ढाँचा द्वारा अनुमति।
युनेटबुटिनसँग (प्रत्यक्ष सीडी)
यदि हामी युनेटबुटिनको साथ लाइभ यूएसबी सिर्जना गर्न चाहान्छौं भने हामीले पहिले अनुप्रयोग स्थापना गर्नुपर्नेछ। हामी यो टर्मिनल खोलेर र निम्न कमाण्ड टाइप गरेर (देबियन-आधारित वितरण, जस्तै उबन्टुमा) टाइप गरेर:
sudo apt स्थापना गर्नुहोस् unetbootin
अर्को कुरा युएसबी पेनड्राइभ तयार गर्नु हो जहाँ हामी स्थापना इकाई बनाउने छौं। सक्छ पेनड्राइभ फर्म्याट गर्नुहोस् (GPart को साथ, उदाहरणका लागि) वा फाइल प्रबन्धकबाट पेन्ड्राइभ प्रविष्ट गर्नुहोस्, लुकेका फाइलहरू देखाउनुहोस् (केहि डिस्ट्रोजमा हामी यसलाई कुञ्जीपाटी सर्टकट Ctrl + H को साथ गर्न सक्दछौं) र सबै सामग्री डेस्कटपमा सार्दै, हामी यो लामो समय सम्म। युनिक्स अपरेटि system प्रणालीमा छन् जुन फाइलहरू हटाउनुको सट्टा फोल्डरमा राख्दछ कचरा उही पेनड्राइभबाट।
त्यसोभए हामीले युनेटबुटिन खोल्नु पर्छ र हाम्रो प्रयोगकर्ताको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, जुन हामी गर्न सक्दछौं टर्मिनल "सुडो अनटबूटिन" टाइप गरेर वा हामीले प्रयोग गरिरहेको वितरण अनुप्रयोग मेनूमा खोजी गरेर।
युनेटबुटिन प्रयोग गर्ने धेरै सरल छ, र यही कारण हो कि मैले पहिले यस विकल्पको बारेमा कुरा गरें। हामीले केवल निम्न गर्नुपर्नेछ:
पहिले हामीले स्रोत छवि छनौट गर्नुपर्नेछ। हामी विकल्प चयन गर्न सक्छौं कि saysDistifications "र यसले स्वचालित रूपमा आईएसओ डाउनलोड गर्दछ, तर मलाई यो विकल्प मनपर्दैन किनकि उदाहरणका लागि उबंटु १ 16.04.०21 अप्रिल २१ मा जारी गरिएको थियो र सबैभन्दा नयाँ संस्करण युनेटबुटिनले यी लाइनहरू लेख्ने समयमा प्रस्ताव गरेको थियो। यो उबुन्टु १ 14.04.०XNUMX हो। , अघिल्लो LTS संस्करण। म अन्य विकल्प प्रयोग गर्न रुचाउँछु: DiscoImagen।
हामी तीन बिन्दुहरूमा क्लिक गर्छौं र ISO तस्विर खोज्छौं जुन हामीले पहिले डाउनलोड गरेका छौं।
हामी ठीक क्लिक गर्दछौं।
हामी कुर्छा। प्रक्रिया केहि मिनेट लिन सक्दछ।
लिली USB क्रिएटरको साथ (लगातार मोड)
यदि युनेटबुटिन प्रयोग गरेर लिनक्स लाइभ यूएसबी सिर्जना गर्न सजिलो छ भने, स्थिर यूएसबी सिर्जना गर्नुहोस् (लाइभ मोडमा पनि हुन सक्दछ) लिली USB निर्माता यो धेरै गाह्रो छैन। केवल खराब चीज यो हो कि यो अनुप्रयोग मात्र विन्डोज को लागी उपलब्ध छ, तर यो लायक छ। अनुसरण गर्ने चरणहरू यी हुन्:
हामी डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् LiLi USB क्रिएटर (डाउनलोड गर्नुहोस्).
हामी पेन्ड्राइभ परिचय दिन्छौं जहाँ हामी USB पोर्टमा स्थापना फाइल / लगातार मोड सिर्जना गर्न चाहान्छौं।
अब हामीले चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ जुन इन्टरफेसले हामीलाई देखाउँदछ:
पहिलो चरण भनेको हाम्रो USB ड्राइव छनौट गर्नु हो।
अर्को हामीले फाइल छनौट गर्नुपर्नेछ जुनबाट हामी बुटेबल यूएसबी बनाउन चाहन्छौं। हामी डाउनलोड गरिएको आईएसओ, स्थापना सीडी छनौट गर्न सक्दछौं वा पछि यसलाई स्थापना गर्न छवि डाउनलोड गर्न सक्दछौं। यदि हामीले तेस्रो विकल्प छनौट गर्‍यौं भने, हामी अपरेटिंग सिस्टमहरूको एक धेरै विस्तृत सूचीबाट आईएसओ डाउनलोड गर्न सक्दछौं। मैले युनेटबुटिन विधिमा भनेझैँ म सधैं आफैंमा आईएसओ डाउनलोड गर्न रुचाउँछु, जसले सुनिश्चित गर्दछ कि म सँधै अप-टु-डेट संस्करण डाउनलोड गर्दछु।
अर्को चरणमा हामीले स्लाइडरलाई दायाँ सार्नुपर्नेछ जब सम्म हामी पाठ see (पर्सिस्टन्ट मोड) देखाउँदैनौं। आकार हाम्रो पेनड्राइभमा निर्भर गर्दछ, तर म सिफारिस गर्दछु अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि। यसले हामीलाई GB जीबी भन्दा बढि अनुमति दिँदैन किनकि त्यो फाईल प्रति अधिकतम साइज हो जुन FAT4 ढाँचाले समर्थन गर्दछ।
अर्को चरणमा म सामान्यतया सबै तीन बक्सहरू जाँच गर्दछु। मध्य एक, जो पूर्वनिर्धारित द्वारा जाँच गरीएको छैन, तपाईलाई बूटयोग्य यूएसबी सिर्जना गर्नु अघि ड्राइवको ढाँचा गर्नका लागि हो।
अन्तमा, हामी किरणमा छुन्छौं र कुर्दछौं।
प्रक्रिया युनेटबुटिन जत्तिकै छिटो छैन, तर यसले हामीलाई हाम्रो पेन्ड्राइभ आफैंमा लैजान्छ र हामी जहाँ जान्छौं हाम्रो GNU / Linux प्रणाली प्रयोग गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » एक बुटेबल यूएसबी कसरी बनाउने